ခင်မင်းဇော်: ဘ၀ဒိုင်ယာရီ အမှတ်တစ်(အပိုင်း ခြောက်)
စောင့်ရကျိုးနပ်ပါတယ်။ နောက် တပိုင်းကို ဆက်လက်မျှော်နေဦးမယ်။
မေးတဲ့လူက မြန်မာတီးရှော့ပ်က မောင်ဆန်လို လူမျိုးမဟုတ်လို့ တော်တော့တယ်။
ရရှိလာတဲ့ အခွင့်အရေးအပေါ် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကင်းစွာ မိမိယုံကြည်ရာ၊ ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို တည်ကြည်ပြတ်သားစွာ ပြောဆိုတင်ပြသွားတာကို လေးစားဂုဏ်ယူပါတယ်။
မြန်မာတွေ အားလုံးနီးပါး ရဲရင့် ပြတ်သားနိုင်ရင် ဒီ စစ်အာဏာရှင် လူမိစ္ဆာတွေရဲ့ ဘ၀ နိဂုံးချုပ်ပြီ။
ကောင်းလိုက်တာ အမရယ်.. တစ်ကယ်ပါ..။ လေးစားပါတယ် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒီလောက် စိတ်ဓါတ်ခိုင်ကျည်နိင်ပါ့မလားဆိုတာလဲ ယောကျာ်းဖြစ်ရက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသေချာနိုင်ဘူး..။ ကိုယ့်ယုံကြည့်ချက်ကို ကိုယ်ရဲရဲရင့်ရင့် ပြောနိုင်ဖို့ဆိုတာ..တစ်ကယ်တစ်ခုခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာ မယုံကြည်ရင် မရပါဘူး..။ ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် စွန့်လွှတ်စွန့်စားခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက် သမိုင်းမကပါဘူး။ ဘယ်လိုဘ၀မျိုးမှာမဆိုကျင်လည်နေသူတွေအတွက် အသုံးကျတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုးတွေကိုပေးနိုင်ပါတယ်..အမရေးထားတာတွေက..။
Thank you, Khin Min Zaw. Please continue with your anecdote. I'm very glad you'd been able to at least to tell the other side what you believe in, and the true nature of what has and is happening in our country. Sometimes those privileged few have no idea of the reality of our lives. And I think in the late 90s, even some of the military personnel were not as brutal and brutalized as they are now, as you had some sort of favours from the very people who guarded you. Maybe there's some ray of hope that the soldiers haven't lost all sense of humanity.
list of hates said...
....အပိုင်း (၆)ကို ဖတ်သွားပါသည် ခင်ဗျား....
ကျွန်တော် ကျူးပစ်ဖိုရမ် မှာပြန်တင်ပေးနေပါတယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မှတ်တမ်းမို့ ဖိုရမ်က သူငယ်ချင်းတွေကို ဖတ်စေချင်လို့ပါ၊ ခုမှ ခွင့်တောင်းတာ ခွင့်လွှတ်ပါ..cohtet
အပိုင်း ၇ ဖတ်သွားပါတယ်။ အမှတ် ၂ ကိုလည်း မျှော်နေပါတယ်။ pdf format နဲ့Ebook ကလေးလုပ်လိုက်ပါလား အစ်မ။ သမိုင်းအတွက် သိမ်းထားသင့်တဲ့ စာလေးတွေ မို့ လို့ ပါ။